Blush waa muusig gaagaaban ee cusub kaas oo si gaar ah ugu imanaya Apple TV + | Waxaan ka socdaa mac
Blush waa muuqaal cusub oo gaagaaban oo si gaar ah ugu socda Apple TV +
Blush gaagaaban waa natiijada iskaashiga ka dhexeeya shirkadda wax soo saarka ee Skydance Animation iyo Apple TV +, runtiina waa sheyga ugu horeeya ee ka baxa heshiiska ay wada gaareen labada shirkadood iyo in aan waxba ka badan oo ay xoojiso wax animation in iman doonaa on Apple TV + sida nasiib, Spellbound iyo Wolfwalker oo horey u jiray, Oscar ayaa magacaabay akadeemiyada Hollywood.
Blush gaagaaban waxaa qoray oo hagayay Joe Mateo, Abaalmarinta Emmy loogu talagalay Gawaarida Gawaarida Gawaarida ee gaaban ee 2009 marka lagu daro 3 magacaabista abaalmarinta Annie Awards, abaalmarino la siiyo warshadaha animation ee filimka Wolkwalkers sidoo kale wuxuu helay magacaabis kala duwan.
John Lasseter ayaa ku jirta soo saarida fulinta ee gaaban, iyo sidoo kale Heather Schmidt Feng Yanu, oo qaban doonta waajibaadka wax soo saar. Heather waxay horey uga soo shaqeysay filimada sida Toy Story iyo Cars.
Ku saabsan taariikhda la siidaayo ee gaaban, Apple ayaan ka hadlin arrintan. Waxay u badan tahay, filimkan gaaban wuxuu ka hor mari doonaa filimada nasiibka, halka aan aadeyno hel codka Jane Fonda. Ku saabsan Spellbound, wax aad u yar ayaa laga ogyahay cinwaankan. Daahfurka labada cinwaan ayaa loo qorsheeyay sanadka 2022.
Labada wax soo saar ee ka dambeeya, waxaa sidoo kale jira, John Lasseter, madaxii hore ee animation Disney iyo Pixar ilaa 2018, markii lagu qasbay inuu ka tago booskiisa kiiska dacwada galmada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple TV » Blush waa muuqaal cusub oo gaagaaban oo si gaar ah ugu socda Apple TV +
Waxay umuuqataa inaan yeelan doono qalinka Apple 3 20 abriil XNUMX
"Ku daawee Codka Mark Ronson" Apple TV-ga cusub ee cusub + ee ku saabsan teknolojiyadda muusikada